musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Thailand Inobvumidza Mazuva gumi nemana Dzimba Flights Ban
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Thailand Ndege Ban
Hat Yai Airport mudunhu reSongkhla muThailand haina chinhu uye yakanyarara. Chiratidzo chega chehupenyu hwevanhu vachengetedzi vari pabasa.
Thailand yatanga kurambidzwa kwemazuva gumi nemana kumabhanhire emumapurovhinzi mumatunhu akatsvuka nerima.
Kurambidzwa kunotanga kubva muna Chikunguru 23 kusvika Nyamavhuvhu 2, 2021, padiki.
Mhosva nyowani nyowani dzinosanganisira iyo COVID-19 Delta musiyano, nemajekiseni asiri kumhanyisa nekukurumidza zvakakwana kuti agadzire hutachiona hwemombe.
Kuti udzore iyo COVID-19 coronavirus, kurambidzwa kwendege kwakaziviswa uye kudzora kwakasimba kuri munzvimbo inoshanda pakarepo. Nzvimbo dzekuongorora nekutarisa zviri munzvimbo yekufamba pakati pematunhu akasviba-tsvuku nenzvimbo nedzimwe nzvimbo.
Nyowani COVID-19 kesi zvakave zvichinyorwa zuva nezuva mudunhu rekumaodzanyemba reSongkhla pamwe nesumbu idzva pamusika mukuru weSapsin mudunhu reMuang. Hofisi yemanisiparati yeNakhon Songkhla yakavhara musika kwemazuva manomwe kubva nhasi, Chikunguru 7 kusvika 22.
Iyo Tourism Chiremera che Tairendi (TAT) yakapa yekuvandudza padenderedzwa nyowani ye COVID-19 zvirambidzo zvakaziviswa kumatunhu gumi nematatu akanyanya uye akasimba anotongwa.
Mhosva nyowani dzinonyanya kusanganisira musiyano weDelta, kunyanya pakati pemapoka ari panjodzi (vane makore makumi matanhatu ekuberekwa uye avo vane hosha dzepasi), nehutachiona hwakawanda hunobva kumba kubva mukati memhuri. Zvisinei nekuyedza kumhanyisa majekiseni, nguva ichiri kudikanwa kuvaka dziviriro yemombe.
The Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) yakawedzera Ayutthaya, Chachoengsao uye Chon Buri munzvimbo ine rima-tsvuku ichiunza huwandu hwematunhu kusvika 13 kuwedzera Bangkok, nematunhu mashanu akapoterera - Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani , Samut Prakan, uye Samut Sakhon - uye 5 matunhu ekumaodzanyemba Thai - Narathiwat, Pattani, Songkhla, uye Yala.
Zvifambiso zveruzhinji zvinotenderwa kushanda pazvikamu makumi mashanu chete kubva muzana zvekugara zvigaro uye zvinofanirwa kushandisa matanho ekuregedzera munharaunda. Zviremera zvine hukama ndezvekuona kuti pane zvakakwana zvekufambisa mabasa, kunyanya kune vanhu vane majekiseni ekudzivirira.
Hotera dzinogona kuvhura pamaawa akajairwa, asi hazvibvumidzwe kuita chero misangano, misangano, kana mabiko. Zvitoro zvakareruka nemisika nyowani zvinotenderwa kuvhura kusvika maawa e2000. Zvese makumi maviri nemaawa zvitoro zviri nyore zvinofanirwa kuvhara husiku pakati pe24-2000 maawa.
Yakarairwa kuvhara kubva muna Chikunguru 23 kusvika Nyamavhuvhu 2 - kana kusvika chimwe chiziviso - inhandare yemitambo, mapaki eruzhinji uye magadheni emiti, marudzi ese enzvimbo dzemakwikwi, nzvimbo dzekuratidzira, nzvimbo dzemisangano, nzvimbo dzekuitira veruzhinji, nzvimbo dzekufundira uye dzimba dzeumhizha, maraibhurari, mamuseum. , mapaki enhoroondo uye nzvimbo dzekuchera matongo, nzvimbo dzinochengetwa masikati, masalon, vanogadzira vhudzi, manicure uye zvitoro zvetatoo, uye madziva ekushambira.
Maresitorendi uye nzvimbo dzekudyira dzinobvumidzwa kupa masevhisi ekutora chete kusvika maawa e2000. Dhipatimendi zvitoro, zvitoro, uye nzvimbo dzekutengesera munharaunda zvinobvumidzwa kuvhura kusvika maawa e2000 uye chete kuzvitoro, zvitoro zvemishonga uye zvekurapa, uye nzvimbo dzekudzivirira.
Iyo nguva yenguva yehusiku-yenguva inoramba isina kuchinja pakati peawa 2100-0400 maawa. Nekudaro, mukati menguva ye7-awa husiku, vanhu vanokumbirwa kuti vagare pamba uye vongoenda kunze kana zvichidikanwa.
Vanobvumidzwa kuramba vakavhurika pasi peyakasimba yekudzivirira chirwere matanho zvipatara, nzvimbo dzekurapa, makiriniki ekurapa, mafamasi, mashopu, mafekitori, emabhengi nemabasa emari, maATM, nharembozha, mapositi uye mapasuru masevhisi, zvitoro zvekudya zvipfuyo, zvekuvakisa uye zvekuvakisa zvitoro, mashopu anotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinodiwa, mabiko ekubikisa gasi, nhepfenyuro dzepeturu, uye masevhisi ekuendesa online.